Budada Root Orlistat (96829-58-2) Soosaarayaasha - Kiimikada 'Phcoker'
Budada Raw Orlistat waa daawo loo isticmaalo daaweynta buurnaanta. Shaqadeeda aasaasiga ahi waxay ka hortageysaa nuugista dufanka ee cuntada aadanaha human.
Fiidiyowga Root Orlistat (96829-58-2) video
Budada Raw Orlistat waxay ku jirtaa nooc daawooyin ah oo loo yaqaan 'lipase inhibitors' oo ka shaqeeya iyada oo la xakameynayo nuugista 25% dufanka cuntada waxaana loo isticmaalaa miisaanka luminta dadka qaangaarka ah ee culus, 18 sano iyo ka weyn, marka la isticmaalo oo leh kaloori-yare iyo cuntada dufanka yar. Budada Raw Orlistat waa daawo loogu talagalay in lagu daaweeyo buurnaanta. Shaqadeeda aasaasiga ahi waxay ka hortageysaa nuugista dufanka ee cuntada aadanaha, taas oo yareyneysa qaadashada kalooriga. Budada Raw Orlistat waxay ku shaqeysaa iyadoo la joojinayo lipase pancreatic, enzyme oo jajabisa triglycerides ee xiidmaha. Iyadoo aan la helin enzyme-kaan, triglycerides-ka laga helo cuntada ayaa laga horjoogsanayaa in lagu hydrolyzed ilaa asiidh dufan bilaash ah oo la nuugi karo waana la sii daayaa iyadoo aan la saarin. Daawada cayriin ee cayriin ee loo yaqaan 'Raw Orlistat' waxaa loo isticmaalaa dadka miisaanka culus oo laga yaabo inay sidoo kale yeeshaan dhiig kar, sonkorow, kolestarool sare, ama wadno xanuun. Waxtarka budada Raw Orlistat ee dhiirrigelinta miisaanka oo yaraada waa mid qeexan laakiin dhexdhexaad ah. Xogta foojignaanta ee tijaabooyinka bukaan socodka waxay soo jeedinaysaa in dadka la siiyay budada Raw Orlistat marka lagu daro wax ka beddelka qaab nololeedka, sida cuntada iyo jimicsiga, waxay luminayaan qiyaastii 2-3 kiilogaraam (4.4-6.6 lb) in ka badan kuwa aan qaadan daawada muddada sanadka ah. Budada cayriin ee loo yaqaan 'Raw Orlistat' sidoo kale waxay si hoose u yareysaa cadaadiska dhiigga waxayna u muuqataa inay ka hortageyso bilawga nooca sonkorowga 2, ha ahaato miisaanka luminta lafteeda ama saameyn kale. Waxay yareysaa dhacdooyinka nooca sonkorowga II ee dadka cayilan qiyaastii inta ay le'eg tahay isbeddelka hab-nololeedka.
Qalabka Root Orlistat (96829-58-2) Qeexitaannada
Product Name Root Orlistat budada
Magaca Kiimikada Tetrahydrolipstatin, 1-((3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl)methyl)dodecyl-2-formamido-4-methylvalerate
brand NAme Alli, Xenish
Fasalka Daroogada lipase inhibitor
Molecular Wsideed 495.745 g / mol
barafku Psaliid <50 ° C
Biological Life-Life Iyadoo ku saleysan xog xadidan, nolosha nuska ah ee budada Raw Orlistat ee la nuugay waxay ku jirtaa inta u dhaxaysa 1 ilaa saacadaha 2.
milmi DMSO: 19 mg / mL
kaydinta Temperature naaquska kaydka. 2-8 ° C
Application Isticmaal si loo daaweeyo cayilka.
Raw Orlistat budada (96829-58-2) Sharaxaad
Noocyada Root Orlistat waxay ku jirtaa daawooyinka loo yaqaan "lipase inhibitors" kuwaas oo ka shaqeeya joojinta nuugista 25% ee dufanka cuntada iyo waxaa loo isticmaalaa miisaanka luminta dadka waaweyn, dadka 18 iyo kuwa ka weyn, marka lala isticmaalo kaloori yareeyo iyo cunto yaryar oo dufan ah.
Kalluunka Orlistat Root waa daawo loogu talagalay in lagu daaweeyo cayilka. Hawlgalkeeda asaasiga ah waxay ka hortagaysaa nuugista dufanka ee cuntada aadanaha, taas oo hoos u dhigeysa qaadashada kalooriga. Macdanta Root Orlistat waxay u shaqeysaa by lipase pancreatic, enzim oo jebiya triglycerides ee mindhicirka. Iyadoo aan la'iseyn enzyme, triglycerides laga helo cuntada ayaa looga hortagi karaa in lagu rakibo asiidh dufan oo bilaash ah oo aan la karinin. Daawooyinka budada ah ee loo yaqaan 'Row Orlistat' ayaa loo adeegsadaa dadka cayilan kuwaas oo sidoo kale leh dhiig kar, sonkorow, kolestarool, ama wadne xanuun. Waxtarka Root Orlistat budada ee dhiirrigelinta miisaanka lumid waa qeexan laakiin xishood. Daraasad laga helay tijaabooyinka bukaan-socodka ayaa muujinaya in dadka loo siiyay budada Raw Orlistat marka lagu daro wax-ka-beddelka hab nololeedka, sida cuntada iyo jimicsiga, lumiyo xNUMX-2 kilograms (3-4.4 lb) in ka badan kuwa aan qaadanin daroogada muddada hal sano ah. Kalluunka Orlistat ayaa sidoo kale si xummaan u yareynaya cadaadiska dhiigga waxayna u muuqataa in laga hortago in ay bilaabanto nooca sonkorowga 6.6, haddii uu ka yimaado miisaanka laftiisa ama waxyeelo kale. Waxay hoos u dhigtaa dhacdooyinka nooca 2aad ee cudurka macaanka ee dadka ku xajinaya isla xaddigaas oo isbeddelka hab-nololeedku sameeyo.
Orlistat budada (96829-58-2) Mashruuca Hawlaha
Budada Orlistat waa nooc ka mid ah lipase-ka oo joojiya daroogada miisaanka oo hoos u dhaca waana nooc ka mid ah biya-baxa lipostatin. Orlistat wuxuu si wax ku ool ah oo xul ah u xakameynayaa lipase caloosha iyo xameetida ganaca, iyadoo aan wax saameyn ah ku yeelanin enzymes-ka kale ee dheef-shiidka (sida amylase, trypsin iyo chymotrypsin) iyo fosforipase, sidoo kale saameyn kuma yeelato nuugista karbohaydraytyada, borotiinka iyo fosfolipids-ka. Daawadani ma nuugayso in kasta oo mareenka caloosha iyo mindhicirka oo uu leeyahay saameyn celin celin ah oo ku saabsan lipase. Orlistat wuxuu joojiyaa enzymes adoo isku xiraya hadhaaga serine ee ku yaal goobaha firfircoon ee caloosha iyo xammeetida. Tani waxay ka hortageysaa baruurta ku jirta cuntada in loo kala jaro asiidh dufan oo lacag la’aan ah iyo diacylglycerol, sidaa darteed lama nuugi karo, iyadoo hoos loo dhigayo qaadashada kalooriga sidaas darteedna loo xakameynayo miisaanka jirka. Daawadani uma baahna inay jidhka oo dhan nuugto si ay u dhaqan gasho. Hawlaha dawooyinka Orlistat waxay ku xiran tahay qiyaasta: qiyaasta daaweynta ee Orlistat (120mg / d, tid, oo lagu qaato cuntada), oo lagu daro cunto kaloori-yar, ayaa yareyn karta ilaa 30% dufanka nuugista. Daraasad isbarbardhigaya mutadawiciinta caadiga ah iyo kuwa cayillan, Orlistat asal ahaan jidhka ma nuugin oo waxay lahayd feejignaan dhiig oo aad u hooseysa. Kadib hal qadar oo afka ah (kan ugu weyni waa 800mg), isku ururinta dhiigga Orlistat ee 8 saacadood ee soo socda waxay ahayd <5 ng / ml. Caadi ahaan, qaddarka daaweynta ee Orlistat ayaa kaliya si yar jidhku u nuugaa mana ku ururin doono muddo gaaban oo daaweyn ah. Tijaabada in vitro, Heerka isku xidhka Orlistat ee borotiinada kale ee serum wuxuu dhaafiyey 99% (borotiinada xidhan waxay badanaa ahaayeen lipoproteins iyo albumin), iyo xaddiga ay ku xidhayaan unugyada dhiigga cas ayaa aad u hooseeyay.
Faa'iidooyinka budada Orlistat (96829-58-2)
List Orlistat wuxuu yareeyaa cufnaanta jirka in kabadan 20% iyadoo kharashka dufanka jirka
Orlista waxay kaa caawineysaa inaad barato sida loo tiriyo kalooriyada
L Orlista waxay ku siinaysaa dareen fayo qab
L Orlista waxay leedahay natiijooyin wax ku ool ah oo kalsooni iyo farxad u ah adeegsadayaasha
L Orlista waxay bixisaa natiijooyin waara oo waara
L Orlista wuxuu yareeyaa halista cudurada sida hypotension, sonkorowga, atherosclerosis iyo
Qorista Orlistat budada (96829-58-2)
Qiyaasta lagu taliyey ee budada Orlistat waa hal xabbo oo ah xaddiga 120-mg maalintii oo leh cunto kasta oo muhiim ah oo dufan leh (inta lagu jiro ama ilaa saacadda 1 kadib cuntada). Qiyaaso ka sareeya 120 mg saddex jeer maalintii ayaan la tusin inay bixiyaan lacag dheeraad ah.
Dadku waa inay ku jiraan cuntada nafaqada leh ee loo yaqaan 'calorie diet low', taas oo ku jirta qiyaasta 30% ee kalooriyada ka timaada baruurta. Qaadashada maalinlaha ah ee baruurta, carbohydrateka, iyo borotiinka waa in lagu qaybiyo saddexda cuno ee ugu muhiimsan. Haddii cunto marmar la seego ama aan lahayn baruur, qiyaasta budada Orlistat ayaa laga saari karaa.
Sababtoo ah budada Orlistat ayaa la muujiyay inay yareyneyso nuugista qaar ka mid ah fiitamiinnada isku-milma dufanka iyo betacarotene, dadka waa in lagula taliyaa inay qaataan fiitamiinno badan oo ay ku jiraan fitamiino-ku-milma dufanka si loo hubiyo nafaqo ku filan. Dhinacyada, fitamiin dheeri ah waa in la qaataa ugu yaraan 2 saacadood kahor ama kadib maamulka budada Orlistat, sida waqtiga jiifka.
Dhibaatooyinka kale ee budada Orlistat (96829-58-2)
Waa wax caadi ah in la ogaado saameynaha ka yimaada budada Orlistat marka aad isticmaasho. Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ama ma ahan oo keliya marka aad qaadato daawo kale. Inta badan saameynta ku yimaada isticmaalka budada Orlistat waxay la xiriiraan habka uu u shaqeeyo habka dheef-shiidkaaga. Waxay badanaa yihiin mid fudud oo si joogta ah u dhaca markaad bilawdid daaweynta. Waxay kaloo dhacaan markaad qaadato cunto dufan badan. Nasiib wanaag, intooda badani way baxaan maadaama ay daaweyntu sii socoto oo ay raacdo cuntada saxda ah.
Waxyaabaha soo socda ayaa ah waxyeelo caadi ah:
▲ Xanuunka caloosha / dhibaatada
▲ Fuuqbax biyo leh
▲ Saxaro shuban
▲ Finan maqaarka ah
▲ Xanuunka dhabarka
Haddii kale, haddii aad ka gudubto mid ka mid ah waxyeeladaas, waa inaad u dhaqantaa sidii xaalad deg-deg ah isla markiiba wac dhakhtarka. Waxay yihiin;
▲ Xanuun daran oo caloosha ah oo aan tagaynin.
▲ Caleemo ama cuncun xad-dhaaf ah
▲ Dhibaato liqid
▲ Neefsasho adag
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate budada (856681-05-5)
Root Lorcaserin budada (616202-92-7)